“Messi waa waayo-araga kaliya ee caalamka kubadda cagta” – Fabio Capello – Gool FM
“Messi waa waayo-araga kaliya ee caalamka kubadda cagta” – Fabio Capello
(Yurub) 18 Feb 2019. Fabio Capello ayaa sheegay in Juventus ay tahay kooxda ugu cadcad ee ku guuleysan karta tartanka xiisaha badan ee Champions League xilli ciyaareedkan.
Juventus ayaa ku wajihi doonta kulan adag kooxda Atletico Madrid kaasoo ka dhici doona caasimada Spain ee Madrid gaar ahaan garoonka Wanda Metropolitano, si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta hore wareega 16-ka tartanka Champions League, habeenka Arbacada ee soo aadan.
Wargeyska Isbaanishka ah ee “Mundo Deportivo” ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay macalinka waayo-araga ah ee reer Talyaani Fabio Capello waxyaabihii uu ka hadlayna waxaa ka mid ahaa:
“Juventus waxay soo ciyaartay laba jeer finalka tartanka Champions League, tani waxay xaqiijineysaa inay heystaan ​​ciyaartoy aad u xoogan ee tababaran, ma ahan wax sahlan inaad gaarto heerkan, sanadkaan waxaan rajeyneynaa inaan gaari karno finalka isla markaana aan ku guuleysano”.
“Cristiano Ronaldo waa mid aad u taxadar leh, wuxuu calaamad u yahay kubada cagta waxaana hubaa inuu doonayo inuu kula guuleysto tartanka Champions League kooxdiisa haatan ee Juventus”.
Capello ayaa wuxuu hadalkiisan ku soo xiray ka hadalka kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi:
“Messi ma awoodo in isaga kaligiis uu ku guuleysto koobka aduunka, ma ahan ciyaaryahan oo kaliya balse waa waayo-arag”.
“Waa waayo-araga kaliya ee caalamka kubada cagta, laakiin isaga kaligiis kuma guuleysan karo koobka aduunka, sababtoo ah kubada cagta waa ciyaar wadareed”.